Ithumbu lePolyurethane, Ithumbu leCaliber enkulu eFlethi, iThunja laManzi lePolyurethane - JL
IiNkcazo ezohlukeneyo kunye noLungiselelo loMlilo Ho...
Siza kukhulula ulwazi lwenkampani yethu kunye namashishini anxulumeneyo, ukwenzela ukuba bonke abathengi banokuqonda ngokukhawuleza nangexesha ulwazi olutsha, oluxabisekileyo kunye nolunenkxalabo yenkampani kunye neshishini lethu.Sazise ngcono ukuze sisebenzisane ngcono.
Indlela yokwahlula imodeli yombhobho womlilo
Indlela yokwahlula imodeli yombhobho womlilo?Umbhobho womlilo udlala indima ebalulekileyo ekulweni nomlilo.Indlela yokuhlela uhlobo lwethumbu lomlilo?Abenzi bombhobho womlilo namhlanje ukunika inqaku: 1, ithumbu lomlilo ngokwe t...
Ungayikhetha njani ipayipi ye-TPU
1. Jonga isatifikethi sokubonakala Jonga ngononophelo ukubonakala kweemveliso zomlilo, khangela ukuba zigqwesile, kwaye ujonge umhla wokuvelisa kunye nobomi beshelufu yeemveliso.Ngexesha elifanayo ...
Yeyiphi ingcaciso kunye nenkonzo e...
Inkcazo ye-hose yomlilo kunye nobomi benkonzo, namhlanje ukukunika impendulo enye.Ukwazisa imisebenzi esisiseko ye-fire hoses: i-fire hoses isetyenziselwa ukuthutha amanzi aphezulu okanye i-flame retardan ...
Indlela yokwandisa ubomi benkonzo yamabhobho omlilo
Abacimi-mlilo bahlala befumanisa ukuba inxalenye yokuqala eyonakalisiweyo yayo nayiphi na i-hose yomlilo ngumgca wokugoqa, nokuba kukulwa nomlilo okanye i-drill drill.Oku kubangelwe ikakhulu kwindawo encinci yokusonga kunye nokunxiba okukhulu ...
Ayizukwenza lukhuni okanye Ibe yiBrittle kwindawo ebandayo.
Isetyenziswa kakhulu kwiPetroleum, kuShishino lweMichiza, ukuThumela, kwezoLimo.
Ukunganxibi, iAcid kunye neAlkali eNxhathisayo, iNganyangelwe kukuMhlwa kwaye iyaxhathisa ukuguga.
Kulula ukuQhagamshela kwaye Urhoxise.
Isetyenziswa kakhulu kwindawo yokuGcinwa kwaManzi, ukuHlangula eMgodini, ukulwa noMlilo nakweminye imimandla.